Peneda-Gêres National Park | Vaovao momba ny dia
Maria | | Fialantsasatra any Eropa, Portiogaly
Na mandritra ny dia mankany Galicia na amin'ny ampahany amin'ny fitsangatsanganana any Portugal, ny fitsidihana ny Peneda-Gêres National Park dia drafitra tena atolotra, indrindra ho an'ireo tia ecotourism. Io no valan-javaboary voalohany ao amin'ny firenena Portiogey ary ny manan-danja indrindra. Nambara izany tamin'ny 1971 ary lasa paradisa voajanahary mahavariana.
Raha tianao ny natiora, ny fitsangantsangana, ny fofonaina rivotra madio ary mankafy ny endrika mahafinaritra, ity no drafitra mety mandritra ny andro sasatra vitsivitsy.
1 Ahoana no ahazoana?
2 Rahoviana no handeha?
3 Aiza no hijanonana?
4 Inona no hita ao amin'ny valan-javaboary Peneda-Gêres?
4.6 Albufeira an'ny Caniçada
Ahoana no ahazoana?
Ity valan-javaboary ity dia manana fidirana maro amin'ny làlana. Ny be mpampiasa indrindra dia ny an'ny reniranon'i Caldo, ao Albufeira da Caniçada akaikin'ny reniranon'i Cávado sy ny an'ny Portela do Homem, izay mifanila amin'ny Orense.
Rahoviana no handeha?
Ny vanim-potoana tsara indrindra mankany amin'ny Parque Nacional da Peneda-Gêres dia amin'ny lohataona na amin'ny fararano satria lava kokoa ny andro ary migaingaina kokoa ary tsy dia misy ny mari-pana ambany sy ny orana. Izany hoe, eo anelanelan'ny faran'ny volana aprily sy ny fiandohan'ny volana oktobra.
Aiza no hijanonana?
I Rio Caldo sy Vila do Gerês no tanàna be torohevitra indrindra hijanonana ao amin'ny valan-javaboary, indrindra fa ity satria tanàna lehibe indrindra ao aminy izy io ary ao no ahitanao hotely kely, trano fandraisam-bahiny, fivarotana, kafe ary koa loharano mafana.
Inona no hita ao amin'ny valan-javaboary Peneda-Gêres?
Any avaratry ny valan-javaboary no ahitantsika ny Mata de Albergaria, izay manana fiarovana avo lenta satria manaitra ny harena voajanahary. Hatramin'ny lalana niampitana azy avy tao Portela do Homem (ny sisintany N308 miampita avy any Galicia mankany Portugal) dia tsy avela hijanona miaraka amin'ilay fiara mandritra ny kilometatra maromaro.
Ity lalana nampifandray an'i Braga tamin'i Astorga ity dia toa nijanona ny fotoana. Mahafinaritra ny zotra romana ary miampita an'ireny ala ireny izay ahitanao ny tongony lehibe, ny tetezana ary ny rindriny mandritra ny kilometatra sy kilometatra. Ny majika amin'ny Geira-Vía Romana XVIII amin'ny alàlan'ny valan-javaboary dia majika fotsiny.
Vila do Gêres dia iray amin'ireo tanàna mpizahatany malaza indrindra ao amin'ny Valan-javaboary Peneda-Gêres ary miavaka amin'ny fandroana mafana sy spa ao aminy tena tsara. Mandritra ny vanin-taona mafana, amin'ity faritra ala ity dia azonao atao ny mankafy ireo dobo sahaza ho an'ny filomanosana izay noforonin'ny riandrano. Mety hampangatsiaka sy hijanona eo am-pialana sasatra.
Amin'ireo riandrano sy riandrano rehetra izay hitantsika ao amin'ny Valan-javaboary Peneda-Gêres, ny malaza indrindra dia ny Cascada do Arado. Azo tratrarina amin'ny alàlan'ny làlana tsara iray izay manomboka amin'ny Ermida, kilometatra vitsivitsy miala an'i Vila do Gêres.
Ny tanànan'i Soajo dia malaza amin'ny espigueiros, ireo tranom-bahiny mahazatra Portiogaly vita amin'ny vato. Manodidina azy dia misy làlana hahafantarana ity sisin'ny Valan-javaboary Peneda-Gêres ity, izay miavaka amin'izany ny Caminho do Fé, ny Trilho do Ramil ary ny Caminho do Pho.
Albufeira an'ny Caniçada
Maherin'ny 30 kilometatra miala an'i Braga no misy an'i Albufeira de Caniçada, ivon'ny hetsika anaty rano ao amin'ny Peneda-Gêres National Park. Eto dia afaka mitaingina kayak na sambo maotera ireo mpitsidika ary mampihatra fanairana amin'ny zavatra hafa.
I Lindoso dia ilaina iray hafa mandritra ny fitsidihany ny Peneda-Gêres National Park. Ao amin'io toerana io no misy ny firaketana lehibe indrindra ny trano fitehirizam-bato vita amin'ny vato any Eropa misy 62 tanteraka. Ho fanampin'izany, ao Lindoso dia misy trano mimanda taonjato faha-1910 izay miorina amin'ny tontolo fiarovana mahafinaritra sy ny jiro manodidina azy. Voatanisa ho tsangambaton'ny firenena izy nanomboka tamin'ny XNUMX.
Ao anatin'ity trano mimanda ity dia misy tranombakoka misy fampirantiana maharitra sy ny fitazonana azy, izay mahatratra hatramin'ny 15 metatra ny haavony.
Ny Vilarinho das Furnas Ethnographic Museum dia manolotra fampahalalana momba ny tontolo voajanahary sy ireo làlana fitsangantsanganana izay azo raisina ao amin'io faritra io, ary koa fampirantiana ireo akanjo nentim-paharazana, fitaovan'ny toeram-pambolena sy sary hosodoko avy ao an-tanàna.
Ny vohitra taloha Vilarinho das Furnas dia teo amin'ny toerana izay ahitanao reservoir lehibe iray nandevina azy tao ambanin'ny ranony tamin'ny 1972. Na izany aza, rehefa milatsaka ny haavon'ny rano dia azo atao ny mahita ny taolany.
Ao amin'ny tanànan'i Melgaço, atsimon'ny tanànan'i Castro Laboreiro ary eo amin'ny 1.033 metatra ambonin'ny haabon'ny ranomasina, dia miorina amin'ny toerana manokana sy manana fomba fijery mahafinaritra ny manodidina ny lapa tsy fantatra anarana.
Ny rava amin'ity trano mimanda ity dia mbola mitazona ny rindrina sy ny vavahady, ny Porta do Sapo no malaza indrindra. Ny renirano Laboreiro dia mandalo amin'ity tontolo ity, ny sisintany voajanahary eo anelanelan'ny filankevitra Entrimo, ao Orense, ary Melgaço any Portugal.
Amin'ny haavo 1.200 XNUMX metatra no misy an'i Pitões das Júnias, tanàna niaviany nanomboka tamin'ny taonjato faha-XNUMX rehefa nanomboka naorina teto ny Monasiteran'i Santa Maria das Júnias. Ny sisa tavela amin'ity tempoly ity sy ireo trano tafo an-tampon'ny ravinkazo ao amin'ilay faritra dia roa amin'ireo mpizaha tany ao amin'ity zoron'ny Peneda-Gêres National Park ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Fialantsasatra any Eropa » Portiogaly » Valan-javaboary Peneda-Gêres
Dia nankany amin'ny nosy Madeira